Gudoomiya Cusub ee Gobolka Hiiraan oo Xoog kula Wareegay Xarunta Gobolka | XORRIYA NEWS
Home News in English Gudoomiya Cusub ee Gobolka Hiiraan oo Xoog kula Wareegay Xarunta Gobolka
Gudoomiya Cusub ee Gobolka Hiiraan oo Xoog kula Wareegay Xarunta Gobolka
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan
Wararka Xorriya Online ka soo gaarayo magaalada madaxda gobolka Hiraan ee Beledweyne ayaa sheegaya in cidamada amniga ee gobolka ay xalay la wareegeen xarumo muhiim ah.
Wararka ayaa tilmaamaya in Howlgal Saqdii dhexe ee xalay aay fuliyeen Ciidamada Amniga Gobolka Hiiraan ay kula wareegeen xarunta maamulka Gobolka Hiiraan looga arimiyo oo horay uu gacanta ugu haayay guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraalle,oo xilka qaadis lagu sameeyay dhawaan kana soo hor jeestay.
Ilo wareedyo ayaa sheegay in ciidamadii ilaalada u ahaa guddoomiyihii hore ee gbolka Hiiraan ay heshiis hoose la galeen guddoomiyha cusub isla markaana lagu heshiiyay in ay baneeyaan xarumaha sidaasna uu guddoomiyha cusub kula wareegay.
Madaxweynaha mamaulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa Xilka-qaadis ku sameeyay guddoomiyihii gobolka Hiiraan isaga oo kasoo hor jeestay go’aanka xilka looga qaday.
Dhinaca kalana waxaa maalmahaan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ka socday kulamo Siyaasadeed loo xal loogu raadinayay arrintaan,waxaana maanta xarumihii maamulka gobolka Hiiraan ku sugan ciidamada daacadda u ah guddoomiyaha cusub.